पपस्टार रिहानाको अभिव्यक्तिमा भारतले जनायो आपत्ति, भन्यो -भारतविरुद्ध सेलेव्रिटी प्रपोगान्डा ! – Nepal Press
पपस्टार रिहानाको अभिव्यक्तिमा भारतले जनायो आपत्ति, भन्यो -भारतविरुद्ध सेलेव्रिटी प्रपोगान्डा !
२०७७ माघ २१ गते १५:०९
काठमाडौं । पपस्टार रिहानाले भारतीय किसानको प्रदर्शनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको तरंग विश्वभर फैलिएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले रिहानाको नाम नलिइकन त्यसलाई ‘सेलेव्रिटी प्रपोगान्डा’को संज्ञा दिएको छ ।
विदेश मन्त्रालय प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले विज्ञप्ती जारी गर्दै अन्तराष्ट्रिय सेलेव्रिटीले दिएको अभिव्यक्तिमा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन् । केही निहित स्वार्थमा चलेका व्यक्ति र समूहले भारतीय संविधान र सरकारविरुद्ध उक्साइरहेको पनि उल्लेख छ ।
इन्डिया टुगेदर र इन्डिया प्रपोगान्डाविरुद्ध ह्यासट्याग उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा किसान प्रदर्शनलाई भारतीय लोकतन्त्र र त्यसको मर्मसँग जोडेर हेर्न आग्रह गरिएको छ । रिहानाले सीएनएनको एउटा न्यूज ट्वीट गरेपछि भारतीय अभिनेत्री कंगना रनावतले उनलाई मूर्खको संज्ञा दिएकी थिइन् ।
सीएनएनले किसान प्रदर्शनलाई रोक्न भारतले दिल्ली वरपर इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगाएको समाचार लेखेको थियो ।
प्रकाशित: २०७७ माघ २१ गते १५:०९